राति निद्रा नलागेर छटपटी भयो ? सुत्नुअघि शरीरको यो भाग दबाउनुहोस् - सिधा मिडिया
८ असार २०७९, बुधबार १७:२३ मा प्रकाशित
217 जनाले पढ़िसके
धेरैलाई राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन।
निद्रा बोलाउनका लागि केही मान्छे घन्टौंसम्म ओछ्यानमा यता र उता पल्टिन्छन्। ‘लौन, कुनै जादू मन्त्र पाएदेखि फुस्स निदाउँथें नि’ भनेर कल्पन्छन् यस्ता मान्छे । यस्ता मान्छेका लागि एउटा जादू उपाय आएको छ । यो हो एक्युप्रेसर र यसले अनिद्रा लगायत शरीरका धेरै समस्या समाधान गर्छ । तपाईंले शरीरका विशेष भागमा दबाब दिनुभयो भने शिशुले जस्तो सुत्न सक्नुहन्छ ।
गर्दनको पीडा : गर्दनमा तीव्र पीडा भएमा चोरी औंला र माझी औंलाबीचको भागमा दबाउँदा पीडा शमन हुन्छ । दाँतको पीडा : दाँतको पीडा हुँदा बूढी औंलाको चारैतर्फ दबाब बनाउनुस् । यसबाट पीडा शान्त हुन्छ । पेटको समस्या : ग्यास भरिने र पेट दुख्ने समस्या हुँदा पनि हत्केलाको बीच भागमा दबाउँदा समस्या सुल्झिन्छ।
कसरी लाग्छ हैजा ? यी हुन् लक्षण र रोकथामका उपाय, थाहै नदिइ ज्यान लान सक्छ, सबैले जान्नै पर्ने २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
नर्भिक अस्पतालमा किशोरीको अड्किएको चम्चा निकालियो
यी रोगका बिरामीले अब मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने